Bluezone Apk Download 2022 ho an'ny Android [Corona Vietnam]
Aprily 9, 2022 Janoary 21, 2022 by John Smith
Marary be izao tontolo izao vokatry ny olan'ny Corona Pandemandefana. Ny vahaolana tokana amin'ity olana ity dia ny fitandremana fiarovana ao anatin'izany ny fanaovana saron-tava. Raha jerena ilay olana dia namoaka ity fampiharana ity fantatra amin'ny anarana hoe Bluezone Apk ny governemanta Vietnam.
Ity dia fampiharana android fampivoarana manokana mifantoka amin'ny olona Vietnamese. Amin'ny alàlan'ity fampiharana ity dia ahafahan'ny governemanta mifandray mivantana amin'ny marary. Ireo dia iharan'izany amin'izao fotoana izao noho ny olan'ny Corona Pandemic.
Na dia am-piasana aza ny governemanta hatramin'ny andro voalohany. Na ny fiheverana ny olan'ny vahoaka aza dia nanangana an'ireto toeram-pitsaboana marobe ireto ny governemanta. Noho izany, ireo olona voakasik'izany dia hihazona ny fisarahana amin'ny olona salama ary hampihena ny aretina miely patrana.
Taorian'ireo hetsika rehetra ireo dia mbola miahiahy momba ny fireneny ihany ny governemanta. Ary hanohizana ny fizotran'ny fanaraha-maso, nanome toromarika ny governemanta federaly ao Vietnam. Ny minisiteran’ny Fampahalalam-baovao sy ny sampan-draharahan’ny fahasalamana no hamoaka ity finday vaovao ity App momba ny areti-mifindra dia ny Bluezone App.
Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny governemanta ny fisarahana ny fisarahana. Ary manaova fanakatonana marani-tsaina izay misy ny fisarahana eo amin'ny tampony. Ankoatra izany, hampitandrina ny manampahefana ny hetsika fampiharana hampidina ny fisarahana ny otrikaretina.
Na ny mpamolavola aza nanampy ity rafitra fanaraha-maso GPS ity ao anaty fampiharana. Ity rafitra fanaraha-maso GPS ity dia hahafahan'ny governemanta manamaivana ny entana entin'ny otrikaretina. Ary avelao ny departemantan'ny fahasalamana handray andraikitra matotra amin'ny faritra manokana izay misy ny otrikaretina indrindra.
Misimisy kokoa momba ny Bluezone Apk
Ity fampiharana android ity dia novolavolain'ny Ministeran'ny fampahalalam-baovao Viet Nam tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny sampana fahasalamana.
Ny tanjona lehibe amin'ny fampandrosoana ny fampiharana android dia ny fanaraha-maso ny fisarahana ny aretina eo amin'ny mponina. Ary zarao ny vaovao farany momba ny fepetra fitandremana.
Ny tanjona voalohany amin'ny fampandrosoana ity fampiharana ity dia ny fanarahana ny olona voakasiky ny COVID. Fa ny fametrahana ny kinova farany an'ny Bluezone Corona App dia ahafahan'ny manampahefana mizara vaovao farany amin'ny vondrom-piarahamonina. Ankoatr'izay, ny mpampiasa dia hitari-dàlana amin'ny lahatsary farany ihany koa.
Aiza no misy fizarana samihafa mikasika ireo viriosy. Ary nizara ny hetsika isan-karazany izay mety hitazomana ny fisarahana ilay otrikaretina. Ao Addition, ny governemanta dia nanome toromarika mafy ny vahoaka. Hametrahana ny kinova farany Apk ao anatin'ireo finday finday.
Developer Cá »c c h» ?? ?? ?? ??,, B B B ™ tin tin ??
Anaran'ny fonosana com.mic.bluezone
SOKAJY Apps - Heath & Fitness
Ho fiarovana azy ireo dia nangataka ihany koa ny governemanta hametraka ny rindranasa ao anaty finday 3 hafa. Aoka hatao hoe raha olona iray ao amin'ny fianakaviana na ao anaty namana namana no misy mametraka ny Bluezone App avy eo dia tsy maintsy mametraka fampiharana mitovy ao anatin'ny telefaona 3 hafa izy.
Noho izany dia hitombo ny fampiasana sy ny fisoratana anarana an'ny COVID manokana. Ary ampio ny fanjakana hanara-maso sy hanara-maso ny mponina ao. Nampanantena ny vahoakany ny governemanta fa tsy hizara ny mombamomba azy manokana amin'ny fikambanana na firenena fahatelo.
Ny rakitra Apk dia misintona maimaimpoana eto miaraka amina fika iray download.
Ankoatra izany, ny mpampiasa finday dia afaka misintona izany avy amin'ny Play Store.
Ny Apk dia tsy manohana doka avy amin'ny antoko fahatelo.
Ny fisoratana anarana miaraka amin'ny fampiharana dia tsy maintsy takiana.
Azon'ny mpampiasa atao ny mametraka ny mombamomba azy mikasika ny hetsika farany ao anatin'ny Apk.
Na ao anatin'ny Apk aza, misy torolàlana maromaro hita ao amin'ny tanjona famakiana.
Ny lahatsary fampianarana isan-karazany dia azo afahana jerena koa.
Ahoana no misintona ary ampiasao fampiharana
Na dia ao anatin'ilay lahatsoratra aza dia efa nilaza izahay fa mahatratra ny fampidinana avy amin'ny Google Play Store ny rakitra Apk tany am-boalohany. Saingy raha mandinika ny fanampiana sy fiononana ho an'ny mpampiasa dia hainay ihany koa ny mandamina ny rindran-tserasera download farany amin'ny tranonkalantsika.
Ho fampidinana ny kinova farany an'ny Bluezone Apk dia tsindrio ny bokotra rohy download izay nomena ao anatin'ilay lahatsoratra. Raha vao manosika ny bokotra rohy download ianao dia manomboka mandeha ho azy. Aorian'ny fisintahana ny kinova farany ny dingana fametrahana dingana manaraka.
Voalohany, tadiavo ny rakitra Apk izay alaina.
Avy eo hanombohana ny dingan'ny fametrahana.
Avelao ny loharano tsy fantatra amin'ny toerana finday.
Aorian'ny fahatanterahan'ny dingana fametrahana dia alao ny menu finday ary apetraho ny fampiharana.
Soraty ny kaontinao manome ny fanomezanao antoka.
Ary mifarana eto.
Manome torohevitra be dia be ireo mpampiasa finday Vietnam izahay mba hiara-miasa amin'ny governemantany. Ary ampidiro ny kinova farany an'ny BlueZone ao anatin'ny smartphone. Ka ny federasiona hahatakatra mora foana ny zava-misy ary avelao havaozina ny vahoaka amin'ny zava-misy ankehitriny.
Sokajy Fahasalamana & Fitness, Apps Tags Bluezone Apk, Bluezone App, Bluezone Corona App, App momba ny areti-mifindra Post Fikarohana
Global Live Apk Download ho an'ny Android [Nohavaozina 2022]
Kormo Job App Apk Download 2022 ho an'ny Android [Asa farany]